NextMapping | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Isku darka shaqada ee Inc. Macluumaadkaaga la wadaagi mayno dhinac saddexaad oo ka baxsan hay'addeenna, oo aan ahayn sida loogu baahan yahay si aan u fulinno amarkaaga.
Waad ka bixi kartaa wixii xiriir mustaqbal ah annaga ah waqti kasta. Waad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda wakhti kasta adiga oo nagala soo xiriiraya cinwaanka emaylka ama nambarka taleefanka ee ku yaal bartayada internetka. Macluumaadka shaqsiyeed ee la ururiyey kiisaskaas waxaa ka mid noqon kara magacaaga, faahfaahinta xiriirkaaga, cinwaanka emaylka, iyo lambarka taleefanka. Waliga cidna lama wadaagi karno ama u iibin mayno macluumaadkaaga qofna.
Su'aalo kasta waa in lagu hagaajiyaa: info@nextmapping.com